गर्मीमा अनुहारलाई चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् | Hamro Doctor News
गर्मीमा अनुहारलाई चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
गर्मी बढेसँगै तपाईंलाई अनेक किसिमका चिन्ताले सताउन थाल्छ । विशेषगरी अनुहार सँग सम्बन्धित समस्याले बढी सताउँछ । किनकी गर्मीयाम सुरु भएसँगै छालासँग सम्बन्धित अनेक समस्याहरु तपाईंको छालामा देखिन थाल्छ । छाला चिल्लो हुने, विमिरा आउने, डन्डिफोर हुने, चाया हुने जस्ता समस्या गर्मी मौसममा देखिने गर्छ । गर्मी मौसममा अनुहारको चम्किलो पन बनाइ राख्न र छालालाई मुलायम बनाइ राख्नका लागि छालालाई पोषणको आवश्यक्ता बढी हुन्छ । घरमै बनाइएको काक्रोको फेश प्याक, गोलभेँडाको रस, बेसार, बेसन, दही र कागतीको रसले बनाइएको फेस प्याक तपाईँको छालाको लागि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । यसले तपाईँको छालामा निखार आउनुका साथै चम्किलो पनि बनाइ राख्नमा मद्दत गर्छ ।
नियमित रुपले अनुहारको हेरचाह सँग सम्बन्धित केही फेश प्याकहरु जुन सजिलै घरमा बनाउन सकिन्छ ती घरेलू प्याकको साथै अनुहारको सफाई, टोनिंग र मोइश्चराइजिंग पनि हुन्छ ।
Last modified on 2019-05-14 13:04:11